Ungayifumana njani inketho "yevidiyo endizithandayo" kuYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Iqonga leYouTube libandakanya ukhetho olusivumela ukuba sijonge uluhlu olupheleleyo lwazo zonke iividiyo "esizithandileyo". Ukufikelela kolu luhlu, kufuneka siklikhe nje kwiqhosha "Iividiyo endizithandayo" kwimenyu ephambili.
Kodwa ukuba awuyazi indlela yokufikelela kolu khetho Siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo apho siza kukubonisa inyathelo ngenyathelo ekufuneka ulilandele ukuze ubone uluhlu lweevidiyo ozithandayo kwiakhawunti yakho yeYouTube.
Amanyathelo okufikelela kukhetho "Iividiyo endizithandayo"
Abasebenzisi beqonga leYouTube baya kuba nakho ukufaka uluhlu lweevidiyo endizithandayo kakhulu Kwinguqulelo yedesktop nakwisicelo sezixhobo eziphathwayo. Kuzo zombini iimeko inkqubo ilula kwaye iyakhawuleza.
Indlela yoku-1: Ukusuka kwinguqulelo yedesktop
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi iividiyo "ozithandayo" kwiYouTube? Ungayenza ngendlela elula kakhulu kwiinguqulelo zedesktop yaleqonga levidiyo elidumileyo.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukufikelela kwiqonga leYouTube kwikhompyuter yethu. Kuya kufuneka uvule isikhangeli kwaye ubhale le dilesi yewebhu ilandelayo Www.youtube.com
Nje ukuba sibe ngaphakathi eqongeni kufuneka ngena nge-imeyile kunye negama lokugqitha. Ngoku sicinezela imichilo emithathu ethe tye ebonakala kwinxalenye ephezulu yasekhohlo kwesikrini kwaye ucofe ukhetho kwi "Library"
Ekupheleni kwephepha uza kufumana icandelo elinesihloko "Iividiyo endizithandayo”. Kulapho, uluhlu olupheleleyo luya kuvela nazo zonke iividiyo "ozithandayo" ngaphakathi kweqonga. Ukufikelela kuluhlu olupheleleyo kufuneka ucofe ku "See All".
Cofa kwi "Iividiyo endizithandayo"
Kukho indlela elula ngakumbi kwaye ethe ngqo ukufikelela kuluhlu lweevidiyo endizithandayo ngaphakathi kuYouTube. Apha siyakucacisela:
cofa ngentla kwemigca emithathu ethe tyaba (kwikona ephezulu ngasekhohlo)
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Iividiyo endizithandayo"
Ilungile. Uya kuba sele ufikelele uluhlu lwazo zonke iividiyo ozithandayo kwiqonga.
Indlela yesi-2: Ukusuka kwisicelo esiselfowuni
Abasebenzisi abahlala befaka i-YouTube kwisicelo esiphathwayo banokufikelela kuluhlu lweevidiyo ezithandwayo eqongeni. Nazi i amanyathelo ekufuneka elandelwe:
Okokuqala kufuneka vula usetyenziso lweYouTube kwisixhobo sakho esiphathwayo. Kwimeko yokungabinayo iseshoni evulekileyo, bonisa i-imeyile yakho kunye negama lokugqitha.
Kwikona esezantsi ngasekunene kwesikrini uza kufumana ukhetho ngegama le "Biblioteca”. Kuya kufuneka ucofe apho ukufikelela kuluhlu lweevidiyo zamva nje kunye nohlu lokudlalwayo.
Apha ngezantsi uyakufumana ukhetho "Iividiyo endizithandayo”. Ukuthinta kuya kuvula iphepha ngazo zonke iividiyo zika-YouTube ozithandayo.
1 Amanyathelo okufikelela kukhetho "Iividiyo endizithandayo"
2 Indlela yoku-1: Ukusuka kwinguqulelo yedesktop
3 Cofa kwi "Iividiyo endizithandayo"
4 Indlela yesi-2: Ukusuka kwisicelo esiselfowuni